Ambatovy: fanohanana ny tantsaha hamboly hazo fihinamboa | NewsMada
Ambatovy: fanohanana ny tantsaha hamboly hazo fihinamboa
Miisa 127 ny tantsaha tompony sy mampiasa ny tany manodidina ny fantsom-by andalovan’ny akoram-potaka avy any Moramanga hatrany Toamasina, tohanan’ny orinasa Tetikasa Ambatovy hamboly hazo fihinamboa. Mitotaly 231 ha ny velaran-tany ambolen’izy ireo, avy amin’ny tanàna fito ao anatin’ny kaominina Andasibe, Ambatovola ary Beforona. Maherin’ny 28 000 ny zana-kazo nozaraina, ahitana voasary, kafe, letisia ary kininina.
Efa notohanan’Ambatovy amin’ny seha-pihariana hafa izy ireo, toy ny fambolena legioma, famokarana zana-kazo, ary kendrena hampidi-bola fanampiny sady maharitra. Nambaran-dRamarsa Nirina Zanamé, monina any Berano, kaominina Andasibe, fa “nihatsara tokoa ny fidiram-bolako noho ireo fambolena legioma sy zana-kazoala notohanan’Ambatovy. Manantena aho fa mbola afaka hanangom-bola bebe kokoa rehefa ho tonga ny vokatra amin’ireto hazo fihinamboa iret,o afaka taona vitsivitsy”. Miisa 60 ny foto-boasary, 50 ny letisia novoleny.
Ankoatra izany, afa-po tanteraka tamin’ny fitsidihana nifanakalozana traikefa natao tany amin’ny faritra Vakinankaratra ireo tantsaha tohanan’Ambatovy, ny fiandohan’ny volana aogositra teo. Miisa 16 izy ireo, avy any amin’ny tanàna manodidina ny fantsom-by sy ny toeram-pitrandrahana any Ambatovy Moramanga. Nahafahana nandranto fahaizana sy traikefa amin’ny lafiny teknika, fahazoana lalam-barotra ary nanitarana ny asa fihariany. Voakasik’izany ny lafiny fambolena sy fiompiana, ny asa tanana avy amin’ny akora fototra eny ifotony. Nahalalan’izy ireo fomba fijery hafa mikasika ny toekarena sy ny fiarahamonina koa izao dia izao.